Archive du 20180614
Depiote ho an’ny fanovana Mitaky ny fialan’ny praiminisitra
Miverina amin’ny tany am-boalohany ary niampy ny fitakiana eny an-kianja amin’izao fotoana dia ny hamongorana tanteraka ireo HVM efa naloam-bahoaka mbola naverina nomena seza.
Politikan’ny fizaran-tseza Talentan’ny Malagasy
Efa nisy marimaritra iraisana vanona sy tsy nanohy savorovoro tokoa ve teto ? Fantatry ny rehetra fa tsia avy hatrany no valiny matoa mbola tafiditra anatina krizy faninefany indray isika izao.
Vola hanaovana ny fifidianana Mbola baraingo
Ny governemanta sisa no andrasanay hifanatona aminay, hoy ny filoha lefitry ny CENI, Thierry Rakotonarivo, raha nanazava mikasika ny fanomanana ny fifidianana amin’izao fotoana.
Governemanta Nametraka ny minisitrany ihany koa ny HVM
Nandeha ihany koa ny famindram-pahefana teo anivon`ireo minisitera sahanin`ny antoko HVM omaly. Nizotra tamin'ny an-tsakany sy an-davany ny fifanaovan-tsonia teo amin'ny minisitry ny asa vaventy teo aloha, Razafimandimby Eric sy ny hisolo azy,
Sehatra iraisam-pirenena Sao dia nampidi-kizo an’i Madagasikara ?
Nitsidika am-pomba fifanajana ny praiminisitra Ntsay Christian teny Mahazoarivo omaly ny lehiben’ny delegasionin’ny vondrona Eoropeanina eto amintsika Atoa Antonio Sanchez-Benedito.
Fanohanana an’i Marc Ravalomanana Tafatsangana ny KMMR Tolagnaro
Tafatsangana ara-dalàna ny 11 jona teo ny KMMR na ny Komity Mpanohana an’i Marc Ravalomanana any amin’ny Distrikan’i Tolagnaro.
Tsy namerina vola 3000 Ar Nokapainy famaky ny lohan-drainy
Tovolahy iray vao herotrerony no namono nahafaty ny rainy tany amin’ny kaominina Ambovomavo Marovoay vao tsy ela akory izay.
Orinasa Fanalamanga Ara-dalàna tsara ny fanadihadiana ataonay, hoy ny Bianco
Manao fanamarihana ny Bianco fa manao fanadihadiana mahakasika raharaha kolikoly tokoa any amin’ny orinasa Fanalamanga –Moramanga amin’izao fotoana ary olona mihoatra ny folo no efa noraisina am-bavany tamin’izany.
Sampana fifohazana FJKM Hanatanteraka vavaka sy fifadian-kanina ho an’ny firenena
Hanatanteraka vavaka sy fifadian-kanina ho fangataham-pitahiana ho an’ny firenena ny sampana fifohazana eo anivon’ny fiangonana Fjkm. Ny sabotsy 23 jona ho avy izao no hanatontosana izany etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina manomboka amin’ny 7 ora sy sasany maraina.
Basikety N1 A any Mahajanga Miditra amin’ny andro faha-6
Miditra amin’ny andro faha-6 anio alakamisy 14 jona ny fifanintsanana lalao basikety fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara sokajy N1 A lahy sy vavy tontosaina any Mahajanga.
Nanoko sikidy teo am-baravaran’ny mpamosavy ve sa nandinika volana teo an-davarangan’ny mpanandro no dia nijabaka tanteraka ankehitriny isika mianakavy, hany ka toa olom-boavidy hatrany no sahin’ireo mpitondra hanadontoana ny sain-dRamalagasy ho olom-boafidy ?
Diaben’ny Kolontsaina Eto Antananarivo ny sabotsy sy alahady izao
Hotanterahina ny 16-17 mey izao eto Antananarivo ny diaben’ny Kolontsaina, hiainga eny Anosy sy Mahamasina ary ny manodidina.
Fampiasam-bola eto Madagasikara Tsy nampanankarena ny Malagasy hatreto
Efa betsaka ny vola fanampiana efa azon’i Madagasikara saingy tsy tafavoaka hatrany ny firenena hatreto.
Toekarena sy fampandrosoana Ireo tsara ho fantatra momba ny vola
“Ny vola no maha rangahy”, “ny vola no hozatry ny fiainana”. Zava-dehibe tamin’ny Malagasy ary ny firenena sy ny olombelona maneran-tany ny vola.